Umfazi weSagittarius - Sagittarius
Ulwazi ngomfazi weSagittarius x
Lo mfazi uthandana ngokukhawuleza kwaye unomdla. Njengazo zonke iimpawu ezivela kwizinto eziphezulu, uMlilo kunye noMoya, utsalwa ngokukrakra lunxibelelwano kwaye ingqondo yakhe ihlala icinga ukuba isemathandweni nangona engenazo iimvakalelo ezinamandla ukuqala. Ukhohliseka ngokulula njengoko elangazelela ukunxulumana nabantu kunye nomntu wokumenza onwabe. Ingxaki iya kubonisa ukuba uthembele kwabanye ngolonwabo lwakhe kancinci kakhulu, kuba iLanga lakhe lobudoda likwiSagittarius, okuthetha ukuba ukhangela eli qabane ligqibeleleyo eliya kunika intsingiselo kubomi bakhe. Intsingiselo kunye nenjongo yobukho bakhe kufuneka ifunyanwe ngaphakathi kuye ukuze lo mfazi abe nolonwabo ngokwenene nabani na, kwaye aqonde ukuba nguye kuphela ulwaneliseko lwakhe oluxhomekeke kuye.
Umfazi weSagittariusUkwabelana ngesondo
Musa ukumangaliswa ukuba lo mfazi ukhubeka kumbhoxo ngelixa ezama ukukhupha umdlalo wokukhulula. Xa ekhupha I condom epokothweni isandla sakhe siya kuxinga, kubekho into ekrazuka angahle aphele yintsini xa ekubona uhamba ze. Ngokuzenzekela njengoko esiba, uphinda abhuqe ngokumangalisayo xa kuthethwa ngesondo. Mhlawumbi ziintloni zakhe kunye nendalo yakhe yobuntwana, ehlala ekhangela iindlela zokuqhekeza umkhenkce. Nokuba siyintoni na isizathu, kuqinisekisiwe ukuba uya kuhleka kwaye enze konke okusemandleni akhe ukuba nexesha elimnandi. Akafuni iqabane elingakhuselekanga kwaye umcingela njengomntu ofuna ukukhula. Kunoko, uya kuvuya kakhulu kunye nomntu ohleka naye, ambambe xa ewa kwaye amnike ixesha elaneleyo lokufumana izizathu zokwabelana ngeemvakalelo kwaye abe nzulu ngakumbi.
Bonke ubudlelwane bubaluleke kakhulu kumfazi weSagittarius. Uyabathanda abantu, ukholelwa kwinqanaba le-naivety kubuhle bobuntu, kwaye akayi kuhlala ade enze wonke umntu ojikeleze kuye onwabe. Iinzame zakhe zokwenza oko ngamanye amaxesha zisenokutyhalela phambili kwaye zingabi ngqiqweni, nto leyo eyenza kube nzima ukumcacisela apho enze khona impazamo kwaye imnike ithemba kumntu obengamfanelanga. Ukuba ucinga ukuba kufuneka atshintshe, kunokuba kuhle ukuba unikezele ngoku. Uyakwazi ukutshintsha kwaye ukuba uphoxekile amaxesha amaninzi unokuba nzulu ngakumbi, angabinangqondo kwaye abe ngcono kwizigwebo zakhe. Nangona kunjalo, oku akusayi kumenza onwabe njengoko ekwiphulo lokuzisa okona kulungileyo kuye wonke umntu, kubandakanya nawe. Ekuphela kwendlela anokonwaba ngayo kunye neqabane lakhe, ukuba ukukhula komntu kuqinisekisiwe kwaye intlonipho yobuntu bakhe ayinamqathango.
Ngaba unokumthembaUmfazi weSagittarius
Lo ngumfazi ongenakuxoka, naxa efuna. Ukuba ubona intombazana ebhityileyo ngokucacileyo iqhatha kuviwo, iLanga lakhe mhlawumbi lingenile Sagittarius . Uthandana ngokulula kwaye unokuba neemvakalelo kubantu abaninzi ngexesha elinye, kodwa akakwazi ukuyifihla kakuhle. Xa ethatha isigqibo sokunyaniseka ngokupheleleyo, ubomi bakhe buya kuba lula, kwaye nangona engenzi, kuya kuba lula kwiqabane lakhe ukuba libone ukunganyaniseki kwakhe kwaye lichaze ukuziphatha kwakhe.
Lo ngumfazi onesidingo se-adventure. Akafuni ukudikwa zizinto ezifanayo ngokuphindaphindiweyo kwaye ufuna imincili kunye notshintsho ebomini bakhe. Kuyaqondakala kuye ukuba akanakuthembela kubantu abaninzi ukuba bamnike ulonwabo alufunayo, yaye akayi kuba nangxaki ukuzenzela yona. Naxa sele emdala, uya kuhlala ekhuthele, kuba ubomi bakhe abunantsingiselo ukuba uyazinza aze ahlale ekhaya, apheke ukutya okufanayo aze ahlambe izitya yonke imihla. Awusoze udikwe naye, kwaye uya kuhlala efumana isizathu sokuncuma. Le yinto ekufanele ukuba ubambelele kuyo.
UkuqondaUmfazi wakho weSagittarius
Ukwiphulo lokwenza ubomi bomntu wonke bubengcono. Nangona ngamanye amaxesha enokuthi atyhale iimbono zakhe kubantu angabaziyo, iinjongo zakhe zilungile kwaye umlingiswa wakhe ulungile, unethemba kwaye womelele. Ukuba akaweleli imigca yabanye abantu ngenkolelo yokuba uyakwazi okona kulungileyo kuye wonke umntu, unokukhupha abona babalaseleyo abamngqongileyo, ngakumbi iqabane lakhe. Umsebenzi wakhe kukwenza umhlaba ube yindawo engcono kwaye iinkolelo zakhe akufuneki zityunyuzwe okanye zitshintshwe. Nangona kufuneka afumane indlela yokuhlala enyanisekile, kufuneka akholelwe kubuhle bekamva. Ekugqibeleni iya kumzisa kuloo ndawo ye-utopian, nokuba uyayikholelwa okanye awuyikholelwa.
Umfazi weSagittariusUkuthandwa nokungathandwa
Uya kukuhlekisa, azise intsingiselo entsha ebomini bakho kwaye enze konke anako ukukufundisa indlela yokonwaba ngakumbi. Ngelishwa, ngamanye amaxesha unokuphulukana nombono wento ayaziyo kwaye atyhale kwiimbono ezingenanto yakwenza nawe. Unobubele, uyonwabisa kwaye unomdla, kodwa kwangaxeshanye akathembekanga, akanalwazi kwaye akalungelelaniswa ngandlel’ ithile.
Ungasikhethela Njani Isipho SakhoUmfazi weSagittarius
Lo mfazi umqondiso weLanga ulawulwa nguJupiter, kwaye uya kuzithanda izipho zonke kunye. Ayinamsebenzi into oyithengayo, okoko nje ibeka uncumo ebusweni bakhe. Akakhathali kakhulu ukuba izinto ziyasebenza okanye akunjalo, ziyanxitywa okanye azinxibi, okoko nje kunikelwa ingqalelo kwaye ubuntu bakhe buvavanywa kakuhle. Mmangalise kwaye umbonise ukuba uyakuxabisa ukuzimela kwakhe kunye nemvakalelo yakhe yokuzonwabisa. Mse kwindawo athanda ukuya kuyo, chola iintyatyambo kwisitiya sikamakhulu wakho xa usendleleni yokuya kumbona, kwaye umbonise ukuba uyaziqonda izinto azithandayo kunye namandla akhe.
Aries Pisces Isagittarius Emanzini Capricorn